Sina: Nosakanana an-tserasera ny Lanonan-dohataonan’i Shanzhai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2009 9:21 GMT
Iza àry no tompon'andraikitra tamin'ity fandrarana ity ? Gowers no nanondro:
Ao amin'ny 163.com dia efa mihoatra ny 200 ny fanehoan-kevitra momba ny gala ary ny ankamaroany dia fanakianana ny ampihimamban'ny CCTV. Ireto àry misy santionany vitsivitsy :
Afaka mijery ny Shanzhai Spring Festival Gala ianao ao amin'ny youtube (saingy sarotra ny manavaka ny tena asan'i Lao Meng satria maro ny mampiasa ny tagy (anaram-pamantarana) Shanzhai mba hitadiavan-daza amin'ny sarimihetsika). Ho an'ny Sinoa any amin'ny tanibe moa dia afaka miditra amin'ny alalan'ny Proxy sy TOR izy ireo. Ity àry misy fampisehoana iray nataon'ny mpianatry ny Oniversiten'i Hong Kong, mampiasa ny Shanzhai ao amin'ny lohateniny :
Misy fampahafantarana bebe kokoa avy amin'ny DANWEI sy hollywoodreporter.
Efa nivoaka tao amin'ny Globalvoices Advocacy nasiana fanovana ity lahatsoratra ity.